ကျမ်းစာထဲက သရဖူ (၅)မျိုး | Rev.U Min Lwin
ကျမ်းစာထဲက သရဖူ (၅)မျိုး
Posted by ဦးမင်းလွင် on 23/06/2012
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: သရဖူ.	1 Comment
ကျွန်တော်သည် ဒီရက်ပိုင်းအတွင် စာဖတ် online စာဖတ်ပရိသတ်နှင့် အနည်းငယ် ကင်းကွာခဲ့ရပါသည်။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင် ကျွန်တော်ထံ သတိရစွာဖြင့် Email ပို့ပြီး မေးမြန်းကြသော မိတ်ဆွေအသီးသီးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ internet connection အခြေအနေကြောင့် post များ မတင် နိုင်ခဲ့ပါ။ connection ရသည်နှင့် မည်သည့် အကြောင်းအရာ စတင်ရေးသားရမလဲ ဆိုသော အချက်ကို စဉ်းစားနေစဉ် တစ်စုံတစ်ယောက်က Email ပို့ မေးမြန်းလာသောသရဖူ (၅)မျိုးအကြောင်း အကျယ်တ၀င့် သိလိုပါသည် ဟူသော စာကြောင့် ဒီ post ကို ရေးသားရန် စိတ်ကူးရလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အကျယ်တ၀င့်တော့ မဟုတ်ပါ။ နောက်နောင် အချိန်ရ အားလပ်သည့် အခါ တရားဟောချက် တစ်ပုဒ် အဖြစ် ရေးသားတင်ဆက်ပေးပါမည်။ ယခုတော့ ဤအကျဉ်းချူပ် ရေးသားချက် အားဖြင့်သာ ကျေနပ် ပေးပါရန် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ကျမ်းစာကို လေ့လာကြည့်သောအခါ ယုံကြည်သူများအတွက် ပြင်ဆင်ထားသော သရဖူ (၅)မျိုးကို ဖေါ်ပြထားသည်။ ဤနေရာတွင် သရဖူ ဆိုရာ၌ ကျွန်တော်တို့ ပြောဆိုနေကြသော ကယ်တင်ခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကယ်တင်ခြင်းရရန် တစ်စုံတစ်ရာ ကြိုးစားအားထုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် သရဖူ ရရန်အတွက် အသက်တာထဲတွင် တစ်စုံတစ်ရာ ကြိုးစား အားထုပ်ရသည်။ အဖိုးအခပေးရမည်။ သရဖူ တစ်မျိုး စီတွင် ယုံကြည်သူများ၏ အကျင့် (သို့) လုပ်ဆောင်မှုများကို အခြေခံ၍ ခရစ်တော်၏ တရားပလ္လင်တွင် ထိုအရာများကို ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုတရားပလ္လင်ကိုဘီးမား တရားပလ္လင် (Bema Seat) ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုပါသည်။
အကြောင်းမူကား ငါတို့ရှိသမျှသည် ကိုယ်ခန္ဓာကျင့်သော အကျင့် ကောင်းမကောင်း ရှိ သည့်အတိုင်း အကျိုးအပြစ်ကို အသီးအသီးခံခြင်းငှါ ခရစ်တော်၏တရားပလ္လင်ရှေ့တွင် ပေါ်လာရမည်။ (၂ကော ၅း၁၀)
ဤအမျိုးအစားသည် ခရစ်တော်အတွက် အသက်ပင် ပေးဆပ်ရန် ၀န်မလေးသောသူများ အတွက် ဖြစ်သည်။ မာတုရများနှင့် မာတုရများကဲ့သို့ပင် ခရစ်တော်အတွက် အသက်ပေးထားသူများသာ ရရှိနိုင်သော သရဖူဖြစ်သည်။အတွက်ဖြစ်ပြီး ကျမ်းစာထဲ တွင် (၂)ကြိမ်တိုင်တိုင် ဖေါ်ပြပါသည်။
စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို သီးခံသောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား စစ်ကြော စုံစမ်းခြင်းကို ခံပြီးမှ ဘုရားသခင် ချစ်သောသူတို့အား ကတိထားတော်မူသော အသက် သရဖူကို ရလိမ့်မည်။ (ယာကုတ် ၁း၁၂)
အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်တွင် ဖေါ်ပြထားသော စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း ဆိုသော စကားလုံးသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်ပါ သည်။ တခါတစ်ရံ အလွန် ဆိုးညစ်သော စကားလုံးများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ လူ့အသတ်သတ်ရန် စုံစမ်း သွေးဆောင်ခံရသည်။ သူ့မယားကို ပြစ်မှားရန် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း ခံရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ထိုစကားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ စစ်ဆေးစုံစမ်းခြင်းကိုလည်း ရည်ညွှန်းတတ်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယုံကြည်ခြင်းကြီးသူ (ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားရာတွင် အမြင့်ဆုံး အနေအထားတွင် ရှိနေသူ) များအတွက်တော့ ထိုစုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းဆိုသည်ကို အပြစ်မြင် ကြောက်ရွံ့လေ့ မရှိပါ။
သင်သီးခံရမည့်အရာ တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ မကြောက်နှင့်။ သင်တို့သည် စုံစမ်းခြင်းကို ခံရမည့်အကြောင်း မာန်နတ် သည် သင်တို့တွင်အချို့ကို ထောင်ထဲ၌လှောင်ထား၍ သင်တို့သည် ဆယ်ရက်ပတ်လုံး ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ခံကြရမည်။ သေသည့် တိုင်အောင် သစ္စာစောင့်လော့။ သို့ဖြစ်လျှင် အသက်သရဖူကို ငါပေးမည်။ (ဗျာဒိတ် ၂း၁၀)
ဤနေရာတွင် မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရာတွင် သေသည့်တိုင်အောင် (until death) ဟူ၍ ဘာသာပြန် ဆိုထားပါသည်။ မူရင်းတွင် သေခြင်းသို့ ဦးတည်သည်တိုင် (unto death) ဖြစ်ပါသည်။ မိမိပြောသည့် စကားကို ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းမှုမပြု။မာတုရ အဖြစ်အသေခံရမည့် အခြေအနေကြုံသည့်တိုင် သစ္စာရှိနေ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ပြောပြီးစကားကို ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါလျှင် ထိုသရဖူကို ဆုံးရှုံးမည်သာ ဖြစ် သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အဓိက ပြောချင်သော သူများမှာ “ဘေးဒါဏ်ကြီး ကာလ”တွင် ကြှုံတွေ့ရမည့် သူများ ကို ရည်ရွယ်၍ ဖော်ပြပါသည်။
အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ် နှစ်ပိုဒ်စလုံးသည် ခရစ်တော်ကို မျှော်လင့်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ ကိုးစားခြင်း တို့ကို အခြေခံပြီး မှ ရရှိခံစားနိုင်သည့် သရဖူအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ မည်မျှပင် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းတို့နှင့် တွေ့လာစေကာမူ၊ နောက်ဆုံး အသက်အန္တရာယ် သေဆုံးနိုင်သည့် အန္တရာယ်နှင့် တွေ့ကြုံသည့်တိုင် ခရစ်တော်အပေါ်တွင် စိတ်ထားလုံးဝ ပြောင်းလဲမှု မရှိသော သူများ အတွက်ဖြစ်သည်။
ပလ္လင်များကိုလည်း ငါမြင်၏။ ပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်သောသူတို့သည် တရားစီရင်ရသော အ ခွင့်ကို ရကြ၏။ သားရဲနှင့် သူ၏ ရုပ်တုကို မကိုးကွယ်၊ သူ၏ တံဆိပ်လက်မှတ်ကို နဖူး၌ မခံ၊ လက်၌မခံဘဲနေ၍ ယေရှု၏ သက်သေခံတော်မူချက်နှင့် နှုတ်ခပတ်တော်တို့ကြောင့် လည် ပင်းကို ဖြတ်ခြင်း ခံရသော ၀ိညာဉ်များကို ငါမြင်၏။ သူတို့သည် အသက်ရှင်၍ နှစ်တစ် ထောင်ပတ်လုံး ခရစ်တော်နှင့် အတူ စိုးစံရကြ၏။ (ဗျာဒိတ် ၂၀း၎)
ဤအမျိုးအစားမှာ သိုးထိန်းအကြီး ပေါ်ထွန်တော်မူသော ကာလ၌ သင်းအုပ်ဆရာများ၊ (Pastor and Elder) ကို ပေးမည့် သရဖူအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ သို့သော် ငွေအတွက် အစေခံသောသူ (သို့) ဘုရား သခင်ပေးသော အမွေထက် ပိုမိုပြီး အခြားအရာများကို တပ်မက်သောသူများ မပါဝင်ပါ။
Dr. Joe Temple ဆိုသော သင်းအုပ်ဆရာကြီး တစ်ဦက သင်းအုပ်များအတွက် သရဖူ ဟူ၍ မခေါ်စေချင် ကြောင်း ပြောခဲ့ပြီး ကျမ်းစာ ဖေါ်ပြချက်အရ သိုးထိန်းအကြီးထံမှ သရဖူ ဟူ၍သာ ခေါ်ဆိုလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်အုပ်ဆရာများအတွက် သီးသန့်သာမဟုတ်။ အချို့မှာ သင်းအုပ်ဆရာ ဟု တရားဝင်ခန့်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း သင်းအုပ်ဆရာ လုပ်ဆောင်သော အလုပ်များ ကို ကြိုးစားဆောင်ရွက်သောသူ အများရှိကြသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ သိုးစုကို ၀န်တာရှိရှိ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သော သူတိုင်း ထိုသရဖူကို ရှိနိုင်သည်။
သင်တို့နှင့် အတူရှိသော ဘုရားသခင်၏ သိုးစုကို ထိန်းခြင်းအမှုမှာ အနိုင်ထိန်းရသော ကြောင့် မဟုတ်။ မစင်ကြယ်သော စီးပွားကို တပ်မက်သောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အလိုလို စေတနာစိတ်ရှိ၍ ကြည့်ရှုအုပ်ထိန်း ကြလော့။ အသီးအသီး အုပ်သော အသင်းတော်တို့ကို အာဏာထား၍ ပြုသည်မဟုတ်ဘဲ သိုးတော်စု ရှေ့မှာ ပုံသက်သေကို ပြသောသူ ဖြစ်ကြ လော့။ သို့ဖြစ်လျှင် သိုးထိန်းအကြီး ပေါ်ထွန်တော်မူသောအခါ သင်တို့သည် မညိုးနွမ်း တတ်သော ဘုန်းကြီးသော ပန်းဦးရစ်သရဖူကို ခံရလိမ့်မည်။ (၁ပေ ၅း၂-၄)
ဤလောကတွင် အသက်ရှင်စဉ်အခါ သင်းအုပ်ဆရာများသည် အကြိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာ ကဲ့ရဲ့ခြင်းများ၊ အပြစ်တင်ခြင်းများနှင့် လစ်လျူရှုခြင်းများကို ခံရသည်။ သို့သော် ညီအကိုတော် လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက် သင်း အုပ်ဆရာများကို အားပေးချင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် အိမ်တော်သို့ မရောက်ကြသေးပါ။ အိမ်တော်သို့ ရောက်သော အခါ ခရစ်တော်က အပြုံးမျက်နှာနှင့် “သာဓုသစ္စာရှိသော ငယ်သားကောင်း” ဟူ၍ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဆီးကြိုနေမည်ကို မျှော်လင့်ရင်း အမှုတော်ထဲမှာ ဆက်လက် ချီတက် လျှောက်လှမ်းရန် အားပေး တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
ဤသရဖူသည် ဧ၀ံဂေလိ (ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်း)ကို ဟောပြောသူများအတွက် ဖြစ်သည်။ ဧ၀ံဂေလိ ဟောပြောသူဆိုရာတွင် သင်းအုပ်ဆရာများကိုသာ ရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အမှုတော် ဆောင်များတင်သာမဟုတ်ပါ။ အယုတ်၊ အလတ်၊ အမြတ်မရွှေး၊ ကလေး၊ လူကြီးမရွှေး ဟောပြောသူတိုင်း ရနိုင်သော အခွင့်အရေးရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် လောက လူသားများ၏ အသက်ဝိညာဉ်ကို ဤစင်္ကြာဝဠာကြီးထက် ပိုမိုတန်ဘိုး ထားပါသည်။ ထိုဝိညာဉ်များကို ခရစ်တော်ထံ ပို့ဆောင်ပေး ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည် ကြွချီလာသောအခါ ထိုအရာတို့သည် ကျွန်တော်တို့၏ ၀မ်းမြောက်ခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါတို့ မျှော်လင့်ခြင်း အကြောင်း၊ ၀မ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ ၀ါကြွားခြင်း၏ ဦးရစ်သရဖူ ကား၊ အဘယ်သို့ သော အကြောင်းအရာနည်း။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ် ကြွလာတော်မူ သောအခါ ရှေ့တော်၌ သင်တို့သည် ထိုသို့သော အကြောင်းအရာဖြစ်ကြသည် မဟုတ် လော။ သင်တို့သည် ငါတို့၏ ဘုန်းအသရေ၊ ငါတို့၏ ငါတို့ ၏ ၀မ်းမြောက်ခြင်း အကြောင်း ဖြစ်ကြသတည်း။ (၁သက် ၂း၁၉-၂၀)
ထို့ကြောင့် ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ ငါ့ဦးရစ်သရဖူ တည်းဟူသော ငါချစ်၍ အလွန် လွမ်းသော ညီအ ကိုတို့၊ ငါဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း သခင်ဘုရား၌ တည်နေကြလော့၊ ငါ့ချစ်သူတို့။ (ဖိလ္လိပိ ၄း၁)
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဒံယေလက ထိုအကြောင်းကို တင်စားပြောဆိုခဲ့သော ကျမ်းပိုဒ်တခု ရှိပါသည်။ ထို ကျမ်းပိုဒ်က
ပညာရှိသောသူတို့သည်လည်း ကောင်းကင်အရောင်မျက်နှာကျက်၏ အရောင်အ၀ါကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ လူများတို့ကို ဖြောင့်မက်ခြင်း တရားလမ်းထဲသို့ သွင်းသောလူတို့သည် လည်း ကြယ်များကဲ့သို့ လည်း ကောင်း အစဉ်ထွန်းလင်ကြလိမ့်မည်။ (ဒံယေလ ၁၂း၃)
ကျွန်တော်တို့သည် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များကို ခရစ်တော်ထံ များများပို့ဆောင်နိုင်လေလေ ကျွန်တော်တို့၏ သရဖူတွင် ကျောက်မြတ်ကြယ်ကလေးများ ပိုမိုများလေလေ ဖြစ်ပါမည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော် တန်ဘိုး ထားသော ၀ိညာဉ်များကို ခရစ်တော်ထံ ပို့ဆောင်နိုင်ရန် ကြိုးစားအားထုပ်ဘို့ တိုက်တွန်းနိုးဆော် လိုပါ သည်။
ဤသရဖူသည် အောင်မြင်သောသူတို့၏ ရရှိမည့် ဦးရစ်ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ခန္ဓာကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သူများ၊ အထူးသဖြင့် တပ်မက်မှုများကို ရှောင်လွှဲနိုင်သောသူများအတွက် ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို မိမိ လောက၏ ပျော်ရွှင်မှု၊ တတ်မက်မှုတို့ ခံစားချင်သော မိမိကိုယ်ခန္ဓာ၏ တောင်းဆိုမှုတို့ကို ပယ်ရှားကာ အသက်ရှင် သော သူများအတွက်ဖြစ်သည်။ု မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်။ သို့သော် မိမိကိုယ်ခန္ဓာ၏ စိတ်အလိုသို့ မလိုက်ဘဲ အရာရာတွင် ဇာတိကို ချုပ်တည်း အသက်ရှင်သော သူများအတွက် ထိုသရဖူကို ရရှိနိုင်သည်။
မြေတလင်း၌ ပြိုင်၍ ပြေးကြသော သူအပေါင်းတို့သည် ပြိုင်၍ပြေးကြသော်လည်း တစ် ယောက်တည်းသာလျှင် ဆုကိုရ သည်ဟု သင်တို့မသိကြသလော။ ဆုကို ရမည့်အကြောင်း ပြေးကြလော့။ ပွဲ၌ပြိုင်၍ အချင်းချင်း တိုက်သောသူမည်သည်ကား အရာရာ၌ တပ်မက် ခြင်းကို ချူပ်တည်းတတ်၏။ ထိုသူတို့သည် ညိုးနွမ်းပျက်စီးတတ်သော ပန်းဦးရစ်ကို ရခြင်း အလို့ငှါ ပြုကြ၏။ ငါတို့မူကား မညိုးနွမ်းမပျက်စီးတတ်သော ပန်းဦးရစ်ကို ရခြင်း အလိုငှါ ပြုကြ၏။ ထို့ကြောင့် ငါပြေးသောအခါ အမှတ်တမဲ့ ပြေးသည်မဟုတ်။ လက်ပွေ့သတ် သောအခါ အာကာသ ကောင်းကင်ကိုသာ ထိုး၍ သတ်သည်မဟုတ်။ သူတစ်ပါးကို ဆုံးမ ပြီးမှ ကိုယ်တိုင်ရှုံးသူ မဖြစ်ရမည့်အကြောင်း ကိုယ်ကို ထိုး၍ နှိပ်စက်လေ့ရှိ၏။ (၁ကော ၉း၂၄-၂၇)
ကျွန်တော်တို့သည် ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာသောအခါ ရှက်ရသောသူ မဖြစ်မည့်အကြောင်း ကျွန်တော်တို့၏ ခန္ဓာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကာ ခရစ်တော်ပေးမည့် မညိုးနွမ်းတတ်သော ပန်းဦးရစ်ကို ရရှိသောသူ များအဖြစ် အသက်ရှင် သင့်သည်။ တမန်တော်ကြီး ရှင်ယောဟန်ကလည်း သူရေးသော သြ၀ါဒစာထဲတွင် အောက်ပါကျမ်းပိုဒ်ကို ထပ်မံရေး သား ထားပြန် ပါသည်။
ချစ်သားတို့ သားတော်သည် ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါ ငါတို့သည် အထံတော်သို့ ရောက်လျှင် ရဲရင့်သော အခွင့်ရှိ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း သား တော်၌ တည်နေကြလော့။ (၁ယော ၂း၂၈)
ဓမ္မ သရဖူ (သို့) ဖြောင့်မက်ခြင်း သရဖူ
ဤသရဖူ အမျိုးအစားသည် ခရစ်တော်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းကို မျှော်လင့်တောင့်တသူတိုင်း ရရှိနိုင်သည့် သရဖူ ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ရက်တွင် ပေးတော်မူမည် ဖြစ်သည်။ သရဖူ (၅)မျိုးထဲတွင် အလွယ်ကူဆုံး ရရှိနိုင်သော သရဖူအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ မည်သူမဆို ရရှိနိုင်သော အခွင့်အရေးရှိနေသည်။
ကောင်းစွာသော တိုက်လှန်ခြင်းကို ငါပြုပြီ၊ ပြေးရသော လမ်းကို အဆုံးတိုင်အောင် ငါပြေး ပြီ။ ယုံကြည်ခြင်း တရားကို စောင့်ရှောက်ပြီ။ ယခုမှစ၍ ဓမ္မသရဖူသည် ငါ့အဖို့ သိုထား လျှက် ရှိပြီ၊ ထိုနေ့ရက်၌ တရားသဖြင့် စီရင်တော်မူသောသူ တည်းဟူသော သခင်ဘုရား သည် ထိုသရဖူကို ငါ၌ အပ်ပေးတော်မူပြီ၊ ထိုမျှမက ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကို တောင့်တ သော သူအပေါင်းတို့၌လည်း အပ်ပေးတော်မူမည်။ (၂တိ ၄း၆-၈)
အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်တွင် တမန်တော် ရှင်ပေါလုက ကောင်းစွာသော တိုက်လှန်ခြင်းကို ငါပြုပြီ” ဟုဆိုရာတွင် သူအသက်တာတွင် ဇာတိ၏ တောင်းဆိုချက်များကို ခက်ခဲစွာ တော်လှန်ခဲ့ရသည်။ “တိုက်လှန်ခြင်းကို ငါပြုပြီ”ဟု ပြောဆိုရာတွင် ထိုအသုံး အနှုံးမှာ စစ်သားတစ်ယောက်က တိုက်ပွဲတွင် ပြောဆိုသော စကားနှင့်တူသည်။ နောက်တစ်ခုမှာ”ပြေးရသော လမ်းကို အဆုံးတိုင်အောင် ငါပြေးပြီ” ဆိုရာတွင် အပြေးသမားတစ်ယောက် ပြောဆိုသည့် ပုံစံမျိုးဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအတွက် နေ့စဉ်အသက်တာအတွက် မာရ သွန်ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်ကြောင်း ယခင်က ရေးသားခဲ့ပြီးသော Post တွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်း တရားကို ငါစောင့်ရှောက်ြပီ ဆိုရာတွင် စောင့်ရှောက် (kept)ဆိုသော စကားလုံးသည် လုံခြုံရေးသမားများ အသုံးပြုသော စကားလုံး ဖြစ်ပြီး သူစောင့်ရှောက်ရသော ပစ္စည်များကို ဂရုစိုက်ရမည် ဖြစ်သည်။ အထက်က ပြောဆိုခဲ့သော စကားလုံးများကို ခြုံငုံလေ့လာ ကြည့်သော် ရှင်ပေါလု ဘ၀အသက်တာတွင် သူလုပ်ဆောင်ရမည့် အငန်းအတာ တာဝန်များကို ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ခရစ်တော် ပြန်လာသော နေ့ရက်တွင် ရရှိမည့် ဆုသရဖူကို သေချာပေါက် ရရှိခံစားမည်ကို သိရှိပြီး ဖြစ်သည်။ သူအတွက် ထိုနေ့ကိုသာ မျှော်လင့်နေတော့သည်။ မည်သည့် အခြေအနေကိုမျှ စဉ်းစားစရာမလို။ အသက်တာတွင် မည်သည့်အရာများကို ကျော်ဖြတ်ရသည်ဖြစ်စေ သူအတွက် ဆုသရဖူ အတွက် မျှော်လင့်ပြီး၊ ရရှိပြီး၊ ခံစားပြီး ဖြစ်သောကြောင့် ခရစ်တော်ပြန်လာမည့် နေ့ရက်ကို မျှော်လင့် တောင့်တနေသည်။
ပတ်မုကျွန်းတွင် တမန်တော် ရှင်ယောဟန်က ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ထိုဆုတောင်းချက်တွင်
သခင်ယေရှု ကြွလာတော်မူပါ။ (ဗျာဒိတ် ၂၂း၂၁)
← ရှေးမဆွက ရွေးနှုတ်ခွဲခန့်ခြင်း (အပိုင်း- ၂)
ကျွန်တော် ဒါဝိတ်ဘုရင်ကို ကြိုက်နှစ်သက် ရခြင်း အကြောင်း →
One comment on “ကျမ်းစာထဲက သရဖူ (၅)မျိုး”
phyo phyo on 07/07/2012 at 8:00 AM said: